Ukuphuma: Khulisa i-ROI Yakho Yokumaketha Okuqukethwe ngokuqukethwe okusebenzisana | Martech Zone
Kwi-podcast yakamuva noMarcus Sheridan, ukhulume ngamaqhinga amabhizinisi alahlekelwa uphawu lapho ethuthukisa imizamo yawo yokumaketha nge-digital. Ungalalela sonke isiqephu lapha:
Ukhiye owodwa akhulume nawo njengoba abathengi namabhizinisi beqhubeka nokuziqondisa ohambweni lwamakhasimende abo kungukuqukethwe okusebenzisanayo. UMarcus ukhulume ngezinhlobo ezintathu zokuqukethwe okuvumela ukuziqondisa.
Ukuzihlela ngokwakho - amandla wethemba lokusetha usuku nesikhathi sokuxhumana nomkhiqizo ngedemo, i-webinar, noma ikholi yokuthola.
Amanani okuzimela - ikhono lokuba nethemba lokuqonda kangcono izindleko zomkhiqizo noma zensizakalo. Lokhu akudingeki ukuthi kufinyelelwe ngokusobala, kepha nokuhlinzeka ibanga kubalulekile ohambweni.
Ukuzihlola - ikhono lokuthola ithuba lokuzulazula ochungechungeni lwemibuzo noma iziqu ezibasiza ukuthi bathole izincomo ngemikhiqizo noma ngamasevisi okuthengayo.
Ukuphuma: Ipulatifomu yokuqukethwe okusebenzisana
Ngokungafani nezikhangiso, okuqukethwe okubandakanyayo kwengeza inani ngokwakha ukwethembana nokusiza idrayivu yomthengi ukuya esinyathelweni esilandelayo ohambweni lokuthenga. Okuqukethwe okusebenzisanayo kungenxa yegciwane futhi kusebenza kakhulu ekubandakanyeni abasebenzisi bakho… kucishe kube ngu-30% ngaphezu kwekhasi lokufika elimile. Okuqukethwe okusebenzisana nakho kukuvumela ukuthi uthole ukuqonda okuningi kubasebenzisi bakho njengoba bephendula imibuzo bese befaka idatha.
Ukufaka okuqukethwe okusebenzisana kuqhuba imiphumela ngo:
Khulisa Amanani Wokuguqulwa Wokuhola - Sebenzisa amathempulethi amahle wangaphambi kokulungiswa we-Outgrow's 1000+ ukuthuthukisa amazinga akho wokuguqulwa abe ngaphezu kuka-40%!
Fanelekela ukuhola futhi ungeze inani - Nikeza izimpendulo ezenziwe zaba ngezakho kumibuzo ecindezela kakhulu yekhasimende lakho, ngenkathi kufaneleka ukuhola kwakho.
Shicilela Ngaphakathi Kwemizuzu Noma Kuphi - Shumeka Okukhishwe kokuqukethwe ekhasini lakho, njengezigelekeqe, engxoxweni, ekuphumeni kwenhloso, noma kusizinda sakho.
I-Intelligent Analytics nokuhlanganiswa kwedatha - Thola imininingwane yamakhasimende ngenkathi ubasiza, hlanganisa izethameli zakho bese uhlanganisa idatha yakho ngamathuluzi angaphezu kwe-1000.
I-Outgrow's Interactive Development Development Studio
Konke kwe UkuphumaIzakhiwo zihlolwe kakhulu futhi zenzelwe ukuguqulwa, ukuzibandakanya, osayizi besikrini, iziphequluli, nokwabelana. Umakhi wabo ohlakaniphile unikeza ukukhetha okukodwa, ukukhetha okuningi, izilayidi zezinombolo, izikali zemibono, izilinganiso, isikhethi sosuku / isikhathi, ukulayishwa kwefayela, nokuningi. Okuqukethwe ongakusebenzisa kufaka phakathi:
Ukuhlolwa / Ukuhlolwa Okuhlukanisiwe
Okuqukethwe kungabhaliswa ngokuphelele ukukhombisa umkhiqizo wakho, ukuhlinzeka ngamagatsha angenamkhawulo embuzweni ngamunye, ukuhlinzeka ngemiyalezo enemibandela ngokuya ngemiphumela, futhi kungakhonjiswa ngezibalo zefaneli ukunikeza ukuqonda ngokusebenza kokuqukethwe kwakho okusebenzisanayo. Imiphumela yesikhathi sangempela ingafaka amashadi womugqa ashukumisayo, amashadi ephayi, amatafula, amashadi wamabha, amashadi e-radar, noma amashadi we-polar.
I-Outgrow isebenza kangcono kithi kunama-blogs nama-ebook ngenxa yokwenza okuthandwa nguwe. Akukona nje ukufunda noma ukubuka okuqukethwe futhi, ithemba ngalinye lithola imininingwane eyenziwe yaba ngeyakho futhi efanele ngesikhathi sangempela noma ngabe kwenziwa nge-calculator, imibuzo, izincomo noma i-chatbot.
ULeonard Kim, Umkhangisi Ophezulu Wezentengiso, Forbes
Ukuphuma kufaka phakathi ukuhlanganiswa okungaphezulu kuka-1,000 XNUMX nedatha ejwayelekile, ukuthengisa, kanye namathuluzi wokumaketha afaka i-Google AmaSpredishithi, i-Aweber, i-Mailchimp, iMarketo, iHubspot, i-GetResponse, i-Emma, ​​i-MailerLite, i-Salesforce Pardot, i-Salesforce CRM, i-Active Campaign, i-Drip, nokuningi!
Yakha Okuqukethwe Kwakho Okusebenzisanayo Kokuqala Ngokuphuma Mahhala
Ukudalula: Ngisebenzisa eyami Ukuphuma isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: amashadi we-barlogic yegatshaukubalaWokubalaumshini wokubalai-chatbotizingxoxoimiyalezo enemibandelaifomu builderamafomuizibalo zefanelikhuphula izinga lokuguqulwakhulisa ukuguqulwakhulisa ukuzibandakanyaukwandisa ukuthengisaokuqukethwe okusebenzisanayoamashadi omugqaumakhi wokuhlola oku-inthanethiwokubala wokubala onlineumakhi we-chatbot onlineinthanethi Imibuzo Umakhiumakhi wenhlolovo onlineithuluzi lokuhlola onlineukuphumaamashadi ephayiamashadi we-polarImibuzo Umakhiukubuzaamashadi e-radarumakhi wenhlolovoamatafula
UJun 17, 2021 ngo-2: 28 AM
Okuthunyelwe okuhle njengokujwayelekile uDouglas,
Okuqukethwe kungaphelelwa yisikhathi ngokushesha ku-inthanethi, ikakhulukazi uma usembonini esheshayo. Ngisho nokuqukethwe okubizwa nge- “evergreen”, okufanele kusebenze iminyaka eminingana, ngombono, kungenzeka kungakhangi abafundi noma i-Google eminyakeni embalwa edlule.